Airbrush Step by Step magazine dia azo alaina any amin'ny fivarotana boky any amin'ny firenena 7 manomboka amin'ny taona 2019
Ny Airbrush Step by Step dia ny gazety ho an'ny mpanakanto rehetra amin'ny fiaramanidina fiaramanidina: manomboka amin'ny vao manomboka ka mandroso, avy amin'ny airbrusher mahazatra hatramin'ny mpanamboatra modely, vatana ary mpandika mpandika ho an'ny mpanazava amin'ny matihanina.
Ny Airbrush Step by Step dia mikendry ireo rehetra liana amin'ny lohahevitra fiaramanidina azo tanterahina ary maniry ny hanatsara ny fahaizan'izy ireo amin'ny alàlan'ny fiaramanidina amin'ny alàlan'ny torohevitra momba ny mpampiasa mamorona sy ny fampahalalana fototra.
Ny Airbrush Step by Step dia manome torolalana ho an'ny dingana an-tsary amin'ny dingana isan-karazany amin'ny fahasarotana samihafa. Manome fahalalana fototra sy toro-hevitra matihanina izy io, manolotra ireo vokatra ankehitriny sy ny teknika farany ary manolotra vaovao sy tatitra momba ny resaka fiaramanidina fiaramanidina sy fanoharana.
Ny Airbrush Step by Step dia ahitana sakamalahana feno, azo ampiharina sy mamorona momba ny andiany: andian-dahatsoratra miharihary, famoahana tatitra, tafatafa momba ny mpanakanto sy portfolio, famelabelarana ny vokatra sy ny fitsapana ary koa ny hetsika sy fampandrenesana amin'izao fotoana izao manasa anao hamaky, hijery, hijery ary hamerina. angony ny boky.
Manomboka amin'ny resaka vaovao 01/19, ny gazety anglisy anglisy Airbrush Step by Step dia hamidy ao amin'ny fivarotana boky sy gazety any amin'ny firenena 7, toa ny any Etazonia, United Kingdom, Spain, Portugal, Brazil, Canada ary Australia . Ny Airbrush Step by Step magazine dia nivoaka tao amin'ny fiteny anglisy nandritra ny 11 taona. Mandraka ankehitriny, ny kopia dia amidy amin'ny fivarotana famatsiana fiaramanidina, amin'ny alàlan'ny famandrihana ary koa ny on-line.
Noho ny fahazoana manaparitaka ny fizarana iraisam-pirenena avy any Angletera, ny vidin'ny kopia eo amin'ny fonony dia hampiseho 699 GBP. Ny famoahana sy fanaovana pirinty dia mbola “natao tany Alemana”. Ny ekipan'ny ASBS dia mirehareha indrindra fa ny boky dia hita any amin'ny fivarotana boky Barnes & Noble any Etazonia. Ny vidin'ny kopika amerikana dia ho 12,99 USD.
Noho ny fotoam-pialan-tsasatra dia manomboka amin'ny volana Janoary ihany ny fandefasana ny olana eto, ka mety ho amin'ny volana febroary mandra-pahatongan'ny gazety any amin'ireo firenena voalaza. Ny antsipiriany momba ny fivarotana sy mpivarotra manokana dia ho hita amin'ny tapaky ny volana janoary.